ဂီယာအုံ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက် - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ Error 400 (Bad Request)!!1
အချိန်: 2017-10-11 hits:
တစ်ဦးကစက် အာဏာအရင်းအမြစ်နှင့်ပါဝါဂီယာစနစ်၏ပါဝင်ပါသည်, သောအာဏာထိန်းချုပ်ထား application ကိုပေးပါသည်။ မကြာခဏထုတ်လွှင့် ရိုးရှင်းစွာဂီယာအုံကိုရည်ညွှန်းသည် ကြောင်းဂီယာကိုအသုံးပြုသည် နှင့်ဂီယာရထား မြန်နှုန်းများကို နှင့် torque တစ်လှည့်ပါဝါအရင်းအမြစ်မှအခြားစက်ကိရိယာမှဘာသာပြောင်း
ဟူသောဝေါဟာရကိုထုတ်လွှင့်မြေတပြင်လုံး drive ကိုရထားကိုရည်ညွှန်းသည်, clutch အပါအဝင်, ဂီယာအုံ, ရိုးကျားကန် (နောက်ဘက်ဘီး drive ကိုများအတွက်), differential ကို, နှင့်နောက်ဆုံး drive ကိုရိုးတံ.
အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုမော်တော်ယာဉ်၌တည်ရှိ၏, ယင်းထုတ်လွှင့်အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်၏ output adapts ဘယ်မှာ drive ကိုဘီးရန်. ထိုသို့သောအင်ဂျင်တစ်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့အလှည့်မြန်နှုန်းမှာလည်ပတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, စတင်ဘို့မသင့်လျော်ရာဖြစ်ပါသည်, ရပ်တန့်, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်နှေးကွေး. အဆိုပါထုတ်လွှင့်သည့်နှေးကွေးဘီးမြန်နှုန်းဖို့ပိုမိုမြင့်မားအင်ဂျင်အမြန်နှုန်းလျော့ကျစေပါတယ်, တိုးမြှင့် torque ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်. transmissions နင်းစက်ဘီးပေါ်လည်းအသုံးပြုကြသည်, fixed စက်တွေ, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလှည့်အမြန်နှုန်းနှင့် torque အဆင်ပြေအောင်ရမည်ဖြစ်သည်
transmissions စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လည်းအသုံးပြုကြသည်, စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ, ဆောက်လုပ်ရေး, သတ္တုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း ပစ္စည်းကရိယာ. ဂီယာတပ်ဆင်ထားပြီးသာမန်ဂီယာအပြင်, ထိုကဲ့သို့သောစက်ကိရိယာများမှ hydrostatic drive ကို၏ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ချိန်ညှိမြန်နှုန်း drives တွေကိုစေသည်
prev: အဘယ်အရာကို plug ကိုတစ်စင်းအားဖြစ်ပါတယ်?